I-TrovaWeb eMcimbini we-Winci: igxathu phambili elibheke ekuqaleni kwe-100% i-Italiancosco
I-GetWeb eMcimbini we-Winci: igxathu phambili elibheke kwi-Cryptocurrency yokuqala yase-Italy
Thola i-GetWeb e-FICO Auditorium eBologna ngomcimbi we-Winci
I-TrovaWeb ukuya emcimbini wokuqala Phila i-AWR Winci ngosuku 21 Septhemba 2019 a Bologna kanye nokwasungulwa kakhulu osomabhizinisi e ochwepheshe kulo lonke elase-Italy, ngenhloso yokwenza owokuqala ukuba mkhulu I-100% i-Italian cryptocurrency.
Eqinisweni, liphumelele kakhulu umcimbi wangaphambi kokwethulwa della I-WINCI i-cryptocurrency lokho kwenzeka al FICO di Bologna phambi kwezithameli ezimbalwa ezingama-350 osomabhizinisi. I-TrovaWeb, Inxusa le-Winci, wayephakathi kwezivakashi ezikhethekile.
I-AWR Winci Live: ITrovaWeb ibikhona emcimbini wokuqala nabamele bayo emugqeni ongaphambili
I-TrovaWeb, lo Qalisa ISiciliana, ubengaphambili emcimbini okhethekile Ukwethulwa kwangaphambili owokuqala Uhlobo lwemali lwase-Italy lwemali. I-AWR Winci kuyiprojekthi Italian okuqhamuka emcabangweni we UDkt. UVirgilio de Giovanni, usomabhizinisi osezingeni eliphakeme welizwe, nabosomabhizinisi abaningi abavelele Izinkampani zase-Italy. Konke 'IFICO ihholo di I-Bologna, zigcwele kuyo yonke imikhakha nezihlalo, ubuholi be I-TrovaWeb ubekhona njengo Ambassador e Merchant wale phrojekthi entsha futhi entsha ezoshintsha imakethe Criptovalute in E-Italy
Winci: I-Cryptocur lwemali ngaphakathi kwawo wonke umuntu
Ubuntu obusha I-CryptoCurrency 100% i-Winci yase-Italy ukuthi, ngokungafani izinhlamvu zemali isivele ikhona, izotholakala kuwo wonke umuntu, amabhizinisi amancane kanye nezinkampani ezinkulu kanye nemikhiqizo. Una i-cryptocurrency okungalingani, okuzoguqukela emaphaketheni wanoma ngubani, kusuka kosomabhizinisi omkhulu kuya kwisakhamuzi esilula esinquma ukuthenga imikhiqizo yabo esitolo amakhredithi abonakalayo. Inani lokushintshwa kwalokhu okusha futhi okusha i-cryptocurrency kuzokhulisa ukubonga ku i-algorithm yezibalo osebenza ngesisekelo se ukuhweba kwangempela lokho kwenzeka nsuku zonke.
IBrain Valley nokubambisana neWinci
Isigodi Sobongo, eholwa nguRuggero Argenio, ingenye yezinkampani ezihola phambili emkhakheni we design e ukuqonda di amapulatifomu edijithali e umkhankaso di Ukuthengisa. Il Ibhizinisi elisemqoka yale nkampani ikakhulukazi isuselwa ezinsizakalweni Cloud e I-Digital Semantic okuhlobene nomsebenzi we marketing e social networking izinkampani ezizimele. Phakathi kwezinye izinsizakalo ezintsha, liphinde lisebenze e-commerce portals. Isigodi Sobongo ihlinzekele izinsizakalo zayo zokunciphisa ukusebenza kwalo msebenzi Winci, ukuhlinzeka ukwesekwa ekusebenzeni kwe cryptocurrency kanye nendlela ezolawula ukukhula kwenani lalesi sikhathi esizayo imali.
Tags: abathengisi be-cryptocurrency I-Italian cryptocurrency imali ebonakalayo thola inxusa le-winci